दसैंको मौका पारेर सिड्नीमा ‘नेपाल काइट फेस्टिभल–२०१८’ हुँदै ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
दसैंको मौका पारेर सिड्नीमा ‘नेपाल काइट फेस्टिभल–२०१८’ हुँदै !
काठमाडौं– दसैंको अवसर पारेर यही शनिवार अर्थात अक्टोबर १३ का दिन अष्टे«लियाको सिड्नीमा पाँचौं संस्करणकोनेपाल काइट फेस्टिभल–२०१८’ आयोजना हुँदैछ । गुठी अष्टे«लियाले सिड्नीको स्थानिय बाइसेन्टिनियल पार्कमा आयोजना गर्न लागेको नेपाल काइट फेस्टिभल–२०१८ को पाँचौ संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । आयोजक गुठि अष्टे«लियाले ‘नेपाल काइट फेस्टिभल–२०१८’ शीर्षक राखेको उक्त फेस्टिवलको मुख्य प्रायोजनको जिम्मा ओली एण्ड एसोसिएट्ले लिएको छ ।
कार्यक्रमको निर्धारित तालिका अनुसार दिउँसो १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतीहरु सञ्चालन गरिने छ । त्यसक्रममा स्थानिय कलाकारहरुको प्रस्तुती, चंगा उडान प्रतियोगिता, मःम खाने प्रतियोगिता, रथ जात्रा, लाखे नृत्य, पुलुकिसी नृत्य सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रमको यो अघिल्लो चरणलाई पारिवारिक शैली प्रदान गरिएको छ भने साँझ ५ बजेपछिको कार्यक्रमलाई सांगीतिक प्रस्तुतीमार्फत अघि बढाइने छ । जस अन्तर्गत गायक दीपक बज्राचार्य तथा रिदम ब्याण्डले उपस्थित दर्शकमाझ आफ्ना लोकप्रिय गीत–संगीत प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसक्रममा अष्टे«लियामै रहेका स्थानिय कलाकारहरुले समेत आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् ।
आयोजक गुठि अष्टे«लियाका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, यद्यपि चंगा लट्टाई भने निश्चित शुल्क तिरि भाडामा किन्नु पाईने छ ।